Shirkadda Golis oo daahfurtay labo adeeg oo muhiim ah | Golis Telecom Somalia
Shirkadda Golis oo daahfurtay labo adeeg oo muhiim ah
Shir Jaraaid oo daaha looga rogayay adeegyo cusub oo muhiim ah ayaa maanta lagu qabtay xarunte dhexe ee shirkadda Golis Telecom Soomaaliya kuwaas oo lagu kala magacaabo XOGMAAL iyo HOODO.
Adeega XOGMAAL oo maanta si rasmi ah loo daahfuray ayaa waxa uu kamid yahay adeegyada shirkadda Golis ee loogu talagalay in kor loogu qaado ogaalka iyo garaadka macaamiisha ka faaiidaysta adeegyada kala duwan ee ay shirkaddu had iyo goor la garan taagantahay macaamiisheeda.
Adeegan ayaa u fududaynaya macmiilka inuu ku xirnaado caalamka isagoo isticmaalaya Mobile-kiisa Goliska, waxa uuna ka helayaa wararka markaa ka cusub deegaanadda Puntland, guud ahaan dalka Soomaaliya iyo dunida inteeda kale.
Sidoo kale qofka iska diiwaan galiya adeega XOGMAAL waxa uu helayaa maqaalo kooban oo ka hadlaya Diinteena suuban, dhaqaalaha iyo ganacsiga, Caafimaadka, Technologiyada, Layaabka dunida, iyo qurmooyin kale oo xiisa badan kuwaas oo loogu talagalay macaamiisha inay waciyga kula socdaan.
Madaxa waaxda Xiriirka dadwaynaha ee shirkadda Golis Telecom Sheikh Fu’aad Maxamuud Xaaji Nuur oo ugu horayn shirkan Jaraaid ka hadlay ayaa sheegay in adeega XOGMAAL uu muhiim u yahay macaamiisha isagoo xusay inuu yahay lacag la’aan isagoo macaamiisha ugu baaqay inay ka faaiidaystaan.
Fu’aad ayaa sidoo kale xusay in adeegan iyo adeegyada kale ee shirkadda dhamaantood loogu talagalay in lagu farxad galiyo macaamiisha laguna wacyi galiyo si ay u noqdaan kuwo ku xiran caalamka intiisa kale.
Adeega HOODO oo isagana maanta lagu daahfuray shirkan jaraaid ayaa lagula soconayaa natiijada imtixaanaadka ardayda waxana isticmaali kara ardayda, waalidiinta, Maamulka iyo macalimiinta dugsiyada iyo jaamacadaha iyo cid walba oo danaynaysa inay ogaato natiijada imtixaanka ardayda wax ka barata goobaha waxbarashada.
Madaxa suuqgaynta shirkadda Golis C/raxmaan C/laahi Jaamac (Dayax) oo adeegan sharaxaad ka bixiyay ayaa sheegay in adeegan ay hada furteen 20 kamid ah goobaha waxbarashadda Puntland kuna gudbiyaan natiijadda ardayda dhigata islamarkaana ay waalidiinti si wanaagsan ula socdaan natiijadda ubadkooda.
Hogaanka ganacsiga shirkadda Golis Telecom Somalia Cumar Ciise Maxamed (Faaruuq) oo soo gabgabeeyay shirka Jaraaid ayaa sheegay in labada adeeg ee maanta bulshada loosoo bandhigay ay ku yimaadeen baahi ay shirkadu dareentay in loo qabo islamarkaana kuwo kale lasoo bandhigi doono xiliyada soo aadan hadii Alle ogolaado.
Si kastaba ha ahaatee waxaa la filayaa in macaamiishu ay bilaabaan isticmaalka adeegyada muhiimka ah lana dhagaysto wixii fikiro ah ee kasoo laabta waxana shirkaddu ay mar walba xil balaaran iska saari doontaa sidii loo sii horumarin lahaa.